Meghan Markle ma ku garaacday diiwaanka Instagram iyada oo warka ku saabsan dhalashada? - dadka - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Meghan Markle ma ku garaacday diiwaanka Instagram iyada oo warka ku saabsan dhalashada? - dadka
Meghan Markle ma ku garaacday diiwaanka Instagram iyada oo warka ku saabsan dhalashada? - dadka
Riix halkan haddii aad dhibaato ku qabtid inaad aragto sawir sawiran ah oo ku saabsan qalabka gacanta
Maaddaama ay tahay actorka telefishanka Maraykanka, bloggerka iyo bini'aadminnimada, Meghan Markle ayaa si adag u shaqeeyay si uu u yeesho joogitaan xooggan oo ku saabsan shabakadaha bulshada.
Hadda waxay tahay Duchess of Sussex iyo mid ka mid ah dumarka sawirada ugu badan ee dunida. Abriil 2, iyada iyo ninkeeda, Prince Harry, ayaa bilaabay xisaabta Instagram ee rasmiga ah. Horeba, xisaabta @sussexroyal waxay muujisay "bartay ciyaarta Instagram" ayaa sheegay in Vanity Fair . Waxay soo saartay tirooyin muujinaya awooda xiddiga lamaanaha ah, iyada oo xisaabinta jebinta rikoodhka loogu talagalay koontada ugu dhakhsaha badan si ay ugu furtaan malaayiin macaamiisha, ayaa ku daray Vanity Fair.
Jimco, @sussexroyal waxay lahayd macaamiisha 4,5 macaamiisha, iyo ilaaliyayaashu waxay isku raaceen in wakhtiga la furo xisaabtu ay ahayd mid aad u weyn.
Meghan waa inuu maalin kasta dhasho. account The @sussexroyal muuqataa in ay tahay meesha ugu badan tahay in uu ku dhawaaqo imaanshiyaha Baby Sussex, ka dib labo reer boqor ayaa ku dhawaaqay khamiistii in uusan siidayn lahaa faahfaahinta dhalashada ilmaha.
Waxa kale oo ay ku dhawaaqeen in aysan ka qayb gali doonin sawir muuqaal ah wax yar ka dib. imaanshaha ilmaha sida Kate Middleton iyo Prince William ka dib dhalasho ee saddexda carruur ah.
Laakiin Meghan iyo Harry waxa ay ka dhaadhicin karaan taageerayaasha iyaga oo sawir ka bixinaya sawirka curadka Instagram, isaga ama magaceeda. Meelaha si taxadar leh loo qaabeeyey oo loo diyaariyey marxaladda waxay noqon kartaa dhaqdhaqaaqa ugu weyn ee awooda caanka ah.
Taasi waa waxa Kardashan iyo wixii Beyonce sameeyey. Instagram waxay siisaa jilayaal si ay u kontoroolaan sheekada oo ay u ilaaliyaan asturnaanta. Waxa kale oo ay keeni kartaa in badan oo niyad wanaag ah iyo joogitaanka sii kordhaya ee shabakadaha bulshada.
Ilaa horraantii Janaayo, sawirka ugu jecel ee Instagram ayaa ahaa mid ka mid ah in Kylie Jenner ay daabacday Febraayo 6 2018 inay ku dhawaaqdo dhalashada gabadheeda Stormi, sida laga soo xigtay Brandwatch.com . sawirka, taas oo muujinaysaa oo keliya suulka nidaamsan Kylie Jenner haysta gacanta maalmood Stormi jir 6, hadda waa sawir labaad ee ugu caansan on Instagram, sawir ka dib markii ukun. Iyadoo 18 malaayiin jeclaan ah, sawirka Stormi ayaa weli ah midka ugu caansan ee lagu dhawaaqi karo Instagram.
Haa, dadku waxay jecel yihiin sawirro caan ah oo ku saabsan ilmaha iyo ilmaha oo ku jira Instagram. Saddex sawir oo Kylie Jenner ah oo leh Stormi oo ku yaala 20 ee ugu caansan sawirada ugu caansan, ayaa sheegay in Brandwatch.com. ogeysiis ee Beyonce 1er February 2017 iyada waxaa filaya mataano Rumi iyo Sir Carter ururiyay 11 million likes halka afar photos qoyska daabacay xiddiga reer Portugal kubada cagta Cristiano Ronaldo, waxay ahaayeen $ 45 million likes.
Waa sahlan tahay in la qiyaaso. xayiraadda dhalashada ee Meghan iyo Harry waxay heleen tiro isku mid ah.
Inkastoo Sussexes account Instagram waa arrin cusub oo tirada dadka taabacsan waxa si wayn u dhimay marka loo eego tirada dadka taabacsan ururtay Kylie Jenner (131 million), Beyonce (126 million) iyo Ronaldo (161 million).
Hase yeeshee xisaabtoodu waxay u badan tahay kororka. Meghan ayaa sidoo kale ogyahay wax ama labo ka mid ah dareenka ah in uu ku jiro internetka. 2018, markii ay guursatay Harry munaasabadda guurinta telefishanka ee heer caalami ah, waxaa loo yeeray maya. 1 «Isbedel cilmi baaris ah ee qaybta Google Dadka.
"Tirada taageerayaasha ayaa sii wadi doonta inay koraan, iyo canug ciyaal ah ayaa ka dhigaya soo galitaankiisa, waxay u badan tahay inuu sii badanayo in tirada taageerayaasha ay kor u kici doonaan," ayuu yiri Vanity Fair. "Xaqiiqda ah in xisaabtu bilowday ka hor intaan ilmuhu imaan" waxay sidoo kale muujinaysaa sirdoonka qaar ka mid ah qalabka boqortooyada (ama ugu yaraan Meghan iyo Harry). "
Dadka: Dumarku waa ay ba'an yihiin: ka dib markii 29 tijaabooyin uur leh oo uur leh, ninkeedu wuxuu qiray inuu qabo cagaarsho
Singuila wuxuu ina tusayaa inuu '' tago 'sida loo ballanqaaday!
Mali: sababaha is casilay ee Soumeylou Boubèye Maïga - JeuneAfrique.com
Cannes: sannadka oo ah agaasimaha haweenka Afrika - JeuneAfrique.com
DRC: Maxkamadda Dacwad-oogista ayaa dib u dhigtay Xukunka Musharaxa Muuse Catumbi saddex sano oo xabsi ah - JeuneAfrique.com
Biyaha ku dhex jira Senegal: guddi wasaaradeed ayaa caddeeyay guushii (ku meelgaarka ahayd) Suez - JeuneAfrique.com
Falaga, wax 3 waxaad filan kartaa in 2019, ku salaysan aad calaamad Burji - DHEERAAD CAAFIMAADKA Maag
DADKA & LIFESTYLE3,091